Faritra Boeny : Nahazo fitaovana fitiliana masomboly -
AccueilRaharaham-pirenenaFaritra Boeny : Nahazo fitaovana fitiliana masomboly
Faritra Boeny : Nahazo fitaovana fitiliana masomboly
27/11/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Mitohy hatrany ny ezakin’ ny fitondram-panjakana amin’ny fanatsarana ny sehatry ny fambolena, indrindra eo amin’ny famokarana ny voka-bary eto Madagasikara. Ao anatin’izay ezaka izay indrindra, dia fantatra ankehitriny fa tafapetraka any amin’ny faritra Boeny ao amin’ny foibe FOFIFA, izay ivon-toeram-pikarohana ampiharina amin’ny fampandrosoana ny eny ambanivohitra, ny « laboratoire de semences et de pédologie » , na fitaovana fitiliana masomboly. Laboratoara izay manaraka ny fenitra ny iraisam-pirenena raha eo amin’ny lafin’ny fahaiza-manao sy traikefa, indrindra eo amin’ny fitiliana ny tany, hazo, rano, masomboly ary zezika. Amin’ny alalan’ity foibe ity, ny Filoha Rajaonarimampianina Hery nonanambara ny filana amin’ny tokony hampakarana ny kalitao sy ny voka-pambolena ao anatin’ny faritra Boeny, ary manerana an’i Madagasikara. Mifandraika amin’izay ihany, dia voalaza fa hametrahana fitaovana fitiliana masomboly toraka izay koa ny any amin’ny faritra Alaotra sy Itasy, izay eo ambanin’ ny fiahiana ara-teknika ny minisiteram-panjakana miadidy ny Fambolena sy fiompiana, sy ny ministera misahana ny Fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiantifika.
Mahakasika ny sehatra ny fiompiana izay hatrany, fa fiompiana hazadrano kosa indray. Tafapetraka any Amborovy, Mahajanga ihany koa ny CDA (Centre de développement de l’Aquaculture de crevettes), izay ivon-toerana fanandramana sy fiompiana makamba. Ankoatra ny fiompiana, dia fantatra fa hanondrana makamba velona be dia be. Ny fanavaozana ny fotodrafitrasa izay tontosa vokatry ny fiaraha-miasa amin’ny tsy miankina mandritra ny 5 taona, izay nosoniavina ny volana febroary taona 2017 ity, teo amin’ny minisiteran’ny Jono sy ny harena anaty rano sy ny orinasa Aquaculture de la Mahajamba (Aqualma). Ity fifanarahana ara-barotra ity, izay ahafahan’i Madagasikara, fa indrindra any amin’ny faritra Boeny, isan’iray amin’ireo mpanondrana makamba sy hazandrano tsara indrindra manerantany, noho ny, fikarohana maro sy fanandramana nampiharina eny amin’ity ivon-toerana ity ho fanatsarana ny kalitaon’ny vokatra. Mbola nidera ny tanànan’i Mahajanga, ary nampirisika ireo mpiara-miombon’antoka hampiasa vola be be kokoa, ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery, ka notsindriany manokana fa manohana sy manampy hatrany ny tetikasa rehetra mitondra fampandrosoana, izay mamorona fotodrafitrasa maharitra, ary mitondra tamberim-bidy ny fitondram-panjakana.
Nironjona tany amin’ny Televiziona Malagasy (TVM) avokoa ny mason’ny Malagasy rehetra omaly, nandritra ilay fihaonana teo amin’ireo kandidà roa, hiatrika ny fihodinana faharoa amin’ny fifidianana Filoham-pirenena. Araka izany, nentin’ny kandidà laharana faha-25, Marc Ravalomanana, nanoloana ...Tohiny
Diplaomasia : Firenena efatra nanamafy fiaraha-miasa amin’i Madagasikara